VacationClub-Ulwandle 411 - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVacationClub
I-VacationClub-i-Seaside Apartment 411 ibekwe kumgangatho we-4 wehotele entsha, iimitha nje ezingama-20 ukusuka kunxweme lwaseKołobrzeg olunesanti. Yindlu enegumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini kunye nombono wolwandle. Le flethi inikezela ngeWi-Fi yasimahla. Ifulethi linomnyango wangaphakathi odibanisa nendlu 410. Amagumbi okudibanisa ayindlela efanelekileyo kwiintsapho okanye kubahlobo.
Le ndlu inekhitshi elilungele ukulungiselela ukutya kwemihla ngemihla. Kukho izixhobo zasekhaya onazo, kuquka. ifriji, i-induction hob, iketile yombane kunye nomatshini wekofu, kunye nesethi yezitya, i-cutlery, izixhobo zasekhitshini, iiglasi kunye neeglasi zewayini. Apha unokufumana yonke into eyimfuneko ukuze ulungiselele ukutya ngokwakho kwaye ujabulele ixesha kunye nosapho okanye nabahlobo.
I-Seaside Apartment 411 iyonwabile kuyilo kunye nentuthuzelo, kodwa inzuzo yayo enkulu yimbono yolwandle. Ihotele ikwindawo ekufutshane ne-Ekopark kwaye ikufutshane neendlela ezinomthunzi kunye neendlela ezintle zebhayisekile ̶ ukuya eLwandle lwePort kunye nePodczel. Indawo efanelekileyo yendlu ivumela ukufikelela kakuhle kumzila kaloliwe kunye nezikhululo zeebhasi.
Umbuki zindwendwe ngu- VacationClub